WARAR DEG-DEG AH Oo Kasoo Kordhay Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyga Ee Saacadaha Kooban Ka Hadheen - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaWARAR DEG-DEG AH Oo Kasoo Kordhay Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyga Ee Saacadaha Kooban Ka Hadheen
Iyada oo muddo 24 saacadood ka yari ka hadhsan tahay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda England waxaa bilawday hawlgalo xawli ah oo ay kooxaha Premier league ku doonayaan in ay dhamaystiraan heshiiyo badan inta aanu barri oo khamiis ah suuqu si rasmi ah u xidhmin.
Haddaba waxaanu halkan idiinku soo koobaysa warar deg deg ah oo aanu warbaahinta kala duwan idiinka soo ururinay.
DEG-DEG: Arsenal ayaa si buuxda ugu guulaysatay difaacii ay xagaagan oo dhan daba socotay ee Kieran Tierney kaas oo hadda u soo safray magaalada London iyada oo Gunners xidigan kala soo wareegaysa Celtic kadib markii ay badaleen qaabkii ay u bixinayeen lacagta dalabkii labaad ee 25 ka milyan gini ku qiimaysnaa.
Kieran Tierney ayaa saacadaha soo socda tijaabada caafimaadka mari doona waxaana heshiiskiisa la dhamaystiri doonaa barri oo khamiis ah oo uu suuqa England xidhmi doono halka ay sidoo kale Gunners doonayso in ay David Luiz isna kala soo wareegto Chelsea.
DEG-DEG: Kooxaha Real Madrid iyoParis Saint-Germain ayaa horumar ka sameeyay dalabkii ay Los Blancos ka gudbisay xidiga reer Brazil ee Neymar Jr. Kooxaha PSG iyo Real Madrid ayaa ku dhaw in ay heshiis gaadhaan.
Kadib markii uu wargayska Sport shaaciyay in Madrid ay dalab 120 milyan iyo Luka Modric iskugu jiray gudbisay, waxa uu markiisa Sky Sports shaaciyay in ay labada kooxood wada xaajood ku jiraan.
DEG-DEG: Tottenham ayaa heshiis buuxa la gaadhay xidiga xulka Argentina iyo kooxda Real Betis ee Giovano Lo Celso waxayna Spurs xidigan ka soo bixinaysaa 55 milyan gini isaga oo heshiiskiisa barri oo khamiis ah si rasmi ah loo dhamaystiri doono.
DEG-DEG: Arsenal ayaa qarka u saaran in ay dhamaystirto heshiiska David Luiz ee ay Chelsea kala wareegayso waxaana la filayaa in heshiiska Luiz lagu dhawaaqi doono galinka hore ee barri oo khamiis ah sida uu Sky Sports shaaciyay.
DEG-DEG: Kooxda Everton ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday in ay heshiis amaah ah ku soo qaaday difaacii midig ee kooxda AS Monaco ee Djibril Sidibe waxayna Everton sii wadatay horumarkii layaabka lahaa ee ay xagaagan kooxdeeda ku samaynaysay.
Baroordiiq Ka Bilaabantay Itoobiya Iyo Murugada Hadhaysay Tuulada Endalgeda